Nagu saabsan - Weifang Meibaoli Sponge Products Co., Ltd.
Daacadnimo weyn iyo rajeyn wanaagsan waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyn doono mustaqbalka dhow.
Warshaddeenu waxay leedahay waax R & D u gaar ah oo soo saari karta badeecooyin kala duwan oo isbuunyo ah iyadoo loo eegayo shuruudaha suuqyada isbadalaya ee joogtada ah; sidoo kale waxay sameyn kartaa badeecooyin habeysan si ay ula qabsadaan dalabaadka macaamiisha kala duwan. Tas-hiilaadka si fiican u qalabaysan iyo xakamaynta tayada wanaagsan waxay ka dhigayaan tayada iyo awoodda alaabooyinka la damaanad qaadi karo. Dadkeenna iibka ahi waa kuwo xirfad leh oo u heellan. Sii wad isku dayga inaad u fidiso adeeg wanaagsan macaamiisha dadaal badan. Alaab tayo sare leh iyo adeegga macaamiisha oo aad u fiican ayaa ku siin doona khibrad ganacsi oo aad u wanaagsan.